Mobic® (မိုဘစ်ခ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Mobic® (မိုဘစ်ခ်)
Mobic® (မိုဘစ်ခ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Mobic® (မိုဘစ်ခ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Mobic® (မိုဘစ်ခ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အဆစ်ရောင်လေးဘက်နာရောဂါနဲ့ အရိုးအဆစ်ရောင်ရောဂါတွေအတွက် သုံးနိုင်ပါတယ။် နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဆစ်များတောင့်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ စတီးရွိုက်အမျိုးအစားမဟုတ်တဲ့ အရောင်ကျဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ နာကျင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
Mobic® (မိုဘစ်ခ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း အစာမပါဘဲသို့ အစာနဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်၊ ရေတစ်ခွက်အပြည့်နဲ့သောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆဆရာဝန်မပြောမချင်းသောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသောက်ပြိးပြီးချင်း အနည်းဆုံး၁၀အတွင်း လှဲလျောင်းခြင်းမျိုးရှောင်သင့်ပါတယ်။
ဗိုက်အောင့်ခြင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အစာ၊နို့၊ အက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ဆေးတွေနဲ့တွဲသောက်နိုင်ပါတယ်။ သေစေနိုင်တဲ့နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းတွေကို ဖြစ်နိုင်ချေများစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆေးပမာဏအများကြီးကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုနေမယ် သို့ နှလုံးရောဂါရှိတယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးခွဲစိတ်မှုတွေမပြုလုပ်ခင်နဲ့ ပြုလုပ်ပြိးမှာ ဒီဆေးကိုအသုံးမပြုပါဘူး
Mobic® (မိုဘစ်ခ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Mobic® (မိုဘစ်ခ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Mobic® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
သေစေနိုင်တဲ့နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းတွေကို ဖြစ်နိုင်ချေများစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆေးပမာဏအများကြီးကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုနေမယ် သို့ နှလုံးရောဂါရှိတယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးခွဲစိတ်မှုတွေမပြုလုပ်ခင်နဲ့ ပြုလုပ်ပြိးမှာ ဒီဆေးကိုအသုံးမပြုပါဘူး
သေစေနိုင်တဲ့အစာအိမ်အူသွေးယိုခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အထူးသဖြင်း့လူကြိးတွေမှာ သတိပေးလက္ခဏာတွေမပေါ်ဘဲ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အခြားအအေးမိခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ အနာကျဆေးတွေအသုံးမပြုခင်မျာ ဆရာဝန်သို့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေကို မေးသင့်ပါတယ်။ meloxicamအလားတူဆေးတွေကို ပေါင်းစပ်ဆေးတွေအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။
NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug)ပါဝင်တဲ့ aspirin, ibuprofen, ketoprofen, or naproxenကဲ့သို့သောဆေးတွေကို ဆေးညွှန်းစာမှာသေချာကြည့်သင့်ပါတယ်။
သေစေနိုင်တဲ့နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းတွေကို ဖြစ်နိုင်ချေများစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆေးပမာဏအများကြီးကို အချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုနေမယ် သို့ နှလုံးရောဂါရှိတယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါမရှိတဲ့လူတွေမှာတောင် ဒီဆေးအသုံးပြုနေစဉ်မှာ လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါဖောက်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နှလုံးခွဲစိတ်မှုတွေမပြုလုပ်ခင်နဲ့ ပြုလုပ်ပြိးမှာ ဒီဆေးကိုအသုံးမပြုပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Mobic® (မိုဘစ်ခ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Mobic® (မိုဘစ်ခ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ မအိမသာဖြစ်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊
ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ လေ
အောက်ပါလက္ခဏာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆေးရပ်လိုက်ပြိး ဆရာဝန်ချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။ အရေပြားအဖိမ့်ထခြင်း၊ စဖြစ်ချင်းချင်းဘယ်လောက်ပျော့ပျော့ပြောသင့်ပါတယ်။
အစာအိမ်သွေးယိုခြင်းလက္ခဏာများ – သွေးဝမ်းအနက်ရောင်ဝမ်းသွားခြင်း၊ သွေးချောင်းဆိုးခြင်း၊ သွေးအန်ခြင်း(ကော်ဖီစေ့ရောင်)
အသည်းပြဿနာများ-မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ဗိုက်အပေါ်ပိုင်းအောင့်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ တုပ်ကွေးလက္ခဏာများ၊ အစားစားလိုစိတ်မရှိခြင်း၊ ဆီးရောင်ရင့်ခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း
ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ- ဆီးနည်းနည်းသွားခြင်းသို့ လုံးဝမသွားခြင်း၊ ဆီးသွားလျှင်နာခြင်းဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ ခြေထောက်ခြေချင်းဝတ်ရောင်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း
သွေးနီဥဆဲလ်နည်းခြင်း- အရေပြားဖျော့တော့ခြင်း၊ လစ်ဟာဟာဖြစ်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခက်ခြင်း
ပြင်းထန်တဲ့အရေပြားပြဿနာများ- ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာလျှာရောင်ခြင်း၊ မျက်လုံးပူခြင်း၊ အရေပြားနာခြင်းပြီးနောက် အနီရောင်အပြာရောင်အဖိမ့်များထွက်လာခြင်း ( အထူးသဖြင့်မျက်နှာနဲ့ကိုယ်အပေါ်ပိုင်း) အရေပြားပေါက်ပြဲခြင်းကွာကျခြင်း
နှလုံးဖောက်ခြင်းသို့လေဖြတ်ခြင်း ၊ မေးရိုးပုခုံးတွေထိပါအောင့်လောက်အောင် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ရုတ်တရက်ထုံခြင်း ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခြမ်းအားနည်းခြင်း၊ စကားဝါးခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်းစတဲ့းလက္ခဏာတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အရေးပေါ်အကူအညီချက်ချင်းယူသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Mobic® (မိုဘစ်ခ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Aliskiren, ACE inhibitors: captopril, lisinopril, etc
Angiotensin II receptor blockers: losartan, valsartan, etc
Cidofovir, lithium, methotrexate (high-dose treatment)
“ Water pills” (diuretics such as furosemide)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Mobic® (မိုဘစ်ခ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Mobic® (မိုဘစ်ခ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Mobic® (မိုဘစ်ခ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်းပမာဏ- 7.5 mgသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- 7.5 mgသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
အများဆုံးအသုံးပြုနိုငိသည့်ပမာဏ- 15 mgသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
Mobic® (မိုဘစ်ခ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
အမှုန့်ပါအရည်သောက်ဆေးပုံစံ- meloxicam 7.5mg in 5Ml
ဆေးပြားများနှင့် အမှုန့်ပါအရည်သောက်ဆေးပုံစံ- meloxicam 7.5mg
Mobic. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-18173/mobic-oral/details#uses. Accessed July 31, 2017
Mobic. https://www.drugs.com/mobic.html. Accessed July 31, 2017